Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Helitaanka Xogta Caalamiga ah, saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay ku baaqayaan in la meel mariyo Sharciga Hormarinta Hormarinta | Somalisan.com
Home Afsomali Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Helitaanka Xogta Caalamiga ah, saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay...
Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Helitaanka Xogta Caalamiga ah, saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay ku baaqayaan in la meel mariyo Sharciga Hormarinta Hormarinta
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ wuxuu maanta dunida inteeda kale kula midoobay xuska Maalinta Caalamiga ah ee Helitaanka Xogta Caalamiga ah ee Sanadka 2020 iyadoo abaabushay dood wadaag ah oo saxafiyiinta kor loogu qaadayo.
wacyi gelinta ahmiyada ay leedahay xaqa helitaanka macluumaadka.
Maalintaas, oo ku beegan 28-ka Sebtember sanad walba, waxay kaloo bixisaa fursad lagu iftiimiyo caqabadaha hortaagan ku-raaxeysiga xuquuqda helitaanka macluumaadka, taas oo dammaanad ka qaadday qodobka 19-aad ee Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha, Qodobka 9-aad ee Axdiga Afrika ee Xuquuqda Aadanaha iyo Dadyowga iyo Qodobka 4aad ee Bayaanka Mabaadi’da ee Xorriyadda Hadalka ee Afrika. Waxaa sidoo kale aqoonsan qodobka 32aad ee dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
Helitaanka macluumaadka ayaa muhiim u ah in si wax ku ool ah loo ixtiraamo xuquuqda aadanaha. Iyadoo aan la ixtiraamin xuquuqda xorriyadda macluumaadka ama helitaanka macluumaadka, xadgudubyada xuquuqda aadanaha waxay u dhacaan si qarsoodi ah, ciqaab la’aanta ayaa sii kordheysa mana jirto hab lagu soo bandhigi karo dowlad aan tayo lahayn “ayuu yiri Cumar Faaruuq Cusmaan, Xoghayaha Guud ee NUSOJ.
“Hay’adaha dowliga ah ee Soomaaliya waxay hayaan macluumaad aad u tiro badan, haddii tan si qarsoodi ah loo qabto, xuquuqda xorriyadda macluumaadka, oo lagu damaanad qaadayo xeerarka xuquuqda aadanaha ee Afrika iyo kuwa caalamiga ah iyo sidoo kale dastuurka Soomaaliya, ayaa si dhab ah loo xakameeyay. Soomaaliya waxay si deg-deg ah ugu baahan tahay helitaanka horusocod ee ku aaddan shuruucda macluumaadka, ”ayuu raaciyay Cismaan.
Saxafiyiinta goobtani waxay soo bandhigeen caqabadaha ay wajahayaan marka ay raadinayaan uruurinta macluumaadka dhabta ah taas oo masuuliyiinta dowlada ay ku carqaladeeyeen helitaanka macluumaadka sidaas darteedna ay muwaadiniinta u diidaan xaquuqda inay ogaadaan.
NUSOJ waxay walaac xoog leh ka muujisay xayiraadaha Golaha Shacabka ku soo rogay saxafiyiinta iyo xarumaha warbaahinta madaxa-bannaan oo ku dadaalayay inay u soo tabiyaan howlaha baarlamaanka si xor ah oo aan lahayn faaf-reeb.
“Golaha Shacabka waa inuu joojiya faafreebka iyo tallaabooyinka kale ee xaddidaadda ah ee lagu soo rogay saxafiyiinta si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo. Tani waxay xadgudub weyn ku tahay xorriyadda macluumaadka ”ayuu yiri Cismaan.
Isaga oo carabka ku adkeeyay in helitaanka macluumaadka ay tahay xuquuq muwaadinimo, Cawil Maxamuud Cabdi, Madaxweynaha Golaha Sare ee NUSOJ wuxuu yiri “macluumaadku wuxuu awood u siinayaa muwaadiniinta in ay gaaraan go’aano xog ogaal ah iyo xulashooyin khuseeya noloshooda iyo howlahooda. Tani waxay u baahan tahay shaacinta danaha dadweynaha ee firfircoon ee macluumaadka si loogu dhiirrigeliyo hufnaanta iyo isla xisaabtanka hay’adaha Dawladda. ”
“Waxaan ku dhiiri galineynaa saxafiyiinta kale in ay si taxadar leh u gutaan helitaankooda macluumaadka saxda ah midowguna wuxuu sameyn doonaa wax walba oo karaankiisa ah si loogu raaxeysto xuquuqdan aasaasiga ah ee aadanaha” ayuu raaciyay Cabdi.
NUSOJ oo daahfureysa baaq qaran oo ku aadan meel marinta helitaanka sharciga macluumaadka, ayaa maanta ku boorisay Dowlada Federaalka Soomaaliya inay dhaqan geliso helitaanka macluumaadka si deg deg ah iyo sida uu farayo dastuurka Soomaaliya oo ay u gudbiso baarlamaanka federaalka warbixin la xiriirta macluumaadka. si loo dhaqan geliyo ku-raaxeysiga xuquuqda helitaanka macluumaadka. Hindise-sharciyeedkan waa inuu sidoo kale la kulmaa jaangooyooyinka Afrika iyo kuwa caalamiga ah, iyo sida ku cad Guddiga Qaaradda Afrika ee Xuquuqda Aadanaha iyo Dadyowga ’Sharciga Moodel ee Helitaanka Macluumaadka.
Previous articleMarking International Day for Universal Access to Information, Somali journalists call for Enactment of Progressive Access to Information Law
Next articleQarax dameer loo adeegsaday oo lagu beegsaday mas’uul sare
Terror funding: Kenya warns of informal money sources FRIDAY OCTOBER 25 2019
Mustafe Sheikh Ali dhuxulow Musharax Madaweyne oo bulshadu sugeysay
Somalisan News - October 25, 2020